ACT/PSAT/SAT - Axdiga Waxbarashada Shirarka
Summit wuxuu si adag u talinayaa taas kasta ardaygu wuxuu kaqeyb qaataa qiimeynta. Kulliyadaha badankood waxay u baahan yihiin buundooyin qiimeyn ah oo qayb ka ah habka ogolaashadooda. Ardayda waxaa laga filayaa inay go'aamiyaan taas oo qiimeynta waxaa doorbidaya kulleejyada (yaasha) ay damacsan yihiin inay dalbadaan.
Ardayda Kulliyada hore ee xiiseynaya qaadashada qiimeynta ayaa iska diiwaangelin kara ACT. Axdiga Barashada Sumcadda shirku ma ahan goob maareyn imtixaan. Ardayda xiiseyneysa inay iska diiwaangeliyaan ACT waa inay si toos ah ula shaqeeyaan la-taliyahooda Summit maadaama ardaydu u baahan doonaan Summit Sumadeedka CEEB si ay isaga diiwaangeliyaan imtixaanka.
Ardayda ku talo jirta gudbinta dhibcaha SAT ee codsiyadooda kuleej, Summit wuxuu si adag ugu talinayaa ardayda inay qaataan labada PSAT ahaan ardaygii Fasalka 10, iyo SAT oo ah fasalka 11-aad. PSAT waxaa loogu talagalay inay u diyaariso arday qaadanaya SAT fasalka 11-aad. PSAT waxaa la bixiyaa sanadkiiba mar - badanaa bisha Oktoobar.
Ardayda ayaa iska diiwaangelin kara qiimeynta iyada oo loo marayo Guddiga Kulliyadda. Gudiga Koleejku waxay soo bandhigaan cutubyo badan oo ah u diyaargarowga imtixaanka iyada oo loo maro websaydhkooda. Gudiga Koleejku waxay maamushaa, maamule u sameysaa isla markaana gaarsiisaa dhibcaha kuliyadaha iyo jaamacadaha sida uu faray ardaygu. Axdiga Barashada Sumcadda shirku ma ahan goob maareyn imtixaan. Ardayda xiiseyneysa inay iska diiwaangeliyaan PSAT ama SAT waa inay si toos ah ula shaqeeyaan la-taliyahooda Summit maadaama ardaydu u baahan doonaan Summit Sumadeedka CEEB si ay isaga diiwaangeliyaan imtixaanka.